घटेको बजारमा दुई लघुवित्तको शेयरमूल्य भने उच्च दरमा बढ्यो - Aarthiknews
काठमाडौं । बिहीवार नेप्से परिसूचक २ दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको छ । नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ४५ दशमलव २५ अंकले घटेको हो । नेप्से परिसूचक घटेको यस दिन दुई लघुवित्त कम्पनीको शेयरमूल्य भने उच्च दरमा बढेको छ ।
आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयरमूल्य भने सर्किट लेभलमा बढेको हो । यस दिन आधिखोला लघुवित्तको शेयरमूल्य १० प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ८७ दशमलव ३० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ९६० दशमलव ७० कायम भएको छ ।
त्यस्तै सिवाईसी लघुवित्तको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको भन्दा ९ दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ५५ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ६०५ दशमलव ३० कायम भएको छ । लघुवित्त समूहको उपसूचक २ दशमलव ५० प्रतिशत घट्दा समेत यी दुई कम्पनीको शेयरमूल्य भने सर्किट लेभलमा बढेको हो । घटेको बजारमा यी कम्पनीहरूको शेयर खरीद चाप उच्च हुँदा मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो ।